musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Vashanyi vanoshanyira Hawaii mumapoka asi vachishandisa zvishoma
Mutsara murefu weudon noodles muWaikiki
Kunyangwe paine chokwadi chekuti vazhinji vevashanyi vachiri kudirana kuzvitsuwa zveHawaii, vari kuuya nemari shoma muhomwe dzavo uye kudzikisira kushandisa kwavo pavanenge vari pazororo. Icho chingave chikonzero nei mitsara kune isingadhuri manoodle nzvimbo uye zvitoro zviri nyore zvakareba kupfuura zvavari kunzvimbo senge Cheesecake Fekitori. Kushandisa kwaChikunguru 2021 kwaive kwakaderera ingangoita 7% kubva pre-COVID-19 mazinga muna Chikunguru 2019.
Pamberi pe COVID-19, Hawaii yakaona marekodhi-chikamu chevashanyi mari uye vanosvika mu2019 uye mumwedzi miviri yekutanga ye2020.
Muna Chikunguru 2019, mari yevashanyi yakadzikira kusvika US $ 1.7 bhiriyoni, kuderera kwe6.8%.
Pakazosvika Chikunguru wa2020, pakanga pasina huwandu hunowanikwa pamashandisirwo evashanyi nekuti hapana ongororo dzekuenda dzaiitwa nekuda kwezvirambidzo zveCOVID-19.
“Kana tikakwanisa kubata nekugona kudzora kupararira kwemusiyano weDelta uye zvakakanganisa masisitimu edu ekuchengetedza hutano, tinogona kutarisira kufamba, kusanganisira kufamba kwenyika dzese, kutanga kudzoka zvine simba pakati paMbudzi uye kuramba tichikura kuburikidza mwaka wezororo wekufamba muna Zvita 2021 uye uchienderera mberi munaNdira, Kukadzi naMarch wa2022, "akadaro Mike McCartney, Director weDhipatimendi reBusiness, Economic Development uye Tourism (DBEDT) uye Mutungamiri akapfuura uye CEO weHawaii Tourism Authority (HTA).
Sekureva kwenhamba dzekutanga dzevashanyi dzakaburitswa neDhipatimendi reBhizinesi, Economic Development uye Tourism (DBEDT) yakazara kushandisa nevashanyi kusvika muna Chikunguru 2021 kwaive $ 1.58 bhiriyoni.
Isati yasvika yepasi rose COVID-19 denda uye Kuzviparadzanisa kweHawaii zvinodiwa kune vafambi, Zvitsuwa zveHawaiian zvakawana marekodhi-chikamu chevashanyi mari uye vanosvika mu2019 uye mumwedzi miviri yekutanga ye2020. Kuenzanisa, Chikunguru 2020 nhamba yemashandisirwo evashanyi yanga isingawanikwe sezvo pakange pasina Kuenda Kuongorora kwakaitika pakati paApril kusvika Gumiguru 2020 nekuda kwe COVID-19 kurambidzwa. Mari yevaenzi yakaderera kana ichienzaniswa ne $ 1.70 bhiriyoni (-6.8%) muna Chikunguru 2019.
"Hupfumi hweHawaii hwaive munzira yakajeka uye hwaisimuka mumwedzi minomwe yekutanga ya2021. Isu takawana mari yakasimba uye vanosvika muna Chikunguru kubva kumusika weUS unodarika mwero we2019 ne29 muzana (+ $ 339.3 mamirioni) yemari uye 21 muzana. (+ 145,267) yevanosvika. Muenzi weHawaii kuUS anoshandisa mari inosvika $ 113 pamunhu parwendo muna 2021, ”akadaro McCartney.
"Aya manhamba akange achibatsirwa nekukwiridzira kudiwa kwevatengi, kuwanda kwendege, sarudzo shoma dzekushanya kwenyika yezhizha uye kuwanda kwemari yemubatanidzwa. Huwandu hwezvekupora muna Chikunguru hwaive pamakumi masere neshanu muzana pasvika vashoma vekunze (zvikamu zviviri muzana), "akawedzera.
Vashanyi vanosvika 879,551 vakasvika nesevhisi yekuHawaiian Islands muna Chikunguru 2021, kunyanya kubva kuUS West neUS East. Vashanyi chete 22,562 (+ 3,798.4%) vakasvika nendege muna Chikunguru 2020. Vashanyi vanosvika muna Chikunguru 2021 vakadzikira kubva muna Chikunguru 2019 kuverenga 995,210 vashanyi (-11.6%).
Mumwedzi waChikunguru 2021, vafambi vazhinji vanosvika vachibva kunze kwenyika uye vanofamba pakati-mudunhu vanogona kupfuura zvaitarisirwa neHurumende kwemazuva gumi kuzvisarudzira neyakaipisisa COVID-10 NAAT bvunzo kubva kune Anovimbwa Kuedzwa Partner vasati vaenda kuHawaii. kuburikidza nechirongwa cheKachengeteka Mafambiro. Uye zvakare, vanhu vakabaiwa jekiseni muUnited States vaigona kudarika mutemo wekuisa vanhu woga kutanga muna Chikunguru. Sangano reUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rakamanikidza zvirambidzo pazvikepe zve cruise kuburikidza ne "Conditional Sail Order", nzira ine nhanho yekumutsiridzwa kwevafambi vechikepe kudzikisa njodzi yekuparadzira COVID-19 pabhodhi.
Ivhareji yekuverengwa kwemazuva ese yaive 265,392 vashanyi muna Chikunguru 2021, zvichienzaniswa ne17,970 muna Chikunguru 2020, maringe ne286,419 muna Chikunguru 2019.
Muna Chikunguru 2021, 578,629 12,890 vashanyi vakasvika kubva kuUS West, pamusoro pevashanyi 4,388.9 2020 (+ 2019%) muna Chikunguru 462,676 uye vachidarika muna Chikunguru 25.1 huwandu hwevashanyi 961.0 (+ 2021%). Vashanyi vekuUS West vakashandisa mamirioni $ 669.8 muna Chikunguru 43.5, iyo yakapfuura $ 2019 mamirioni (+ 186%) yakashandiswa muna Chikunguru 12.4. Mari yepakati yezuva nezuva yevashanyi ($ 8.95 pamunhu, + 2.1%) uye hurefu hwakareba hwekugara (mazuva 2019, + XNUMX%) zvakare yakabatsira mukukura kweUS West mashandisirwo evashanyi achienzaniswa neXNUMX.
Paive nevashanyi 272,821 kubva kuUS East muna Chikunguru 2021, zvichienzaniswa nevashanyi 7,516 (+ 3,530.0%) muna Chikunguru 2020, uye vashanyi 243,498 (+ 12.0%) muna Chikunguru 2019. Vashanyi veUS East vakashandisa mamirioni 558.8 muna Chikunguru 2021 zvichienzaniswa ne $ 510.7 mamirioni. (+ 9.4%) muna Chikunguru 2019. Kureba kwekugara (mazuva 9.94, + 2.6%) kwakabatsirawo mukuwedzera kwemashandisirwo evashanyi eUS East. Kushandisa kwezuva nezuva ($ 206 pamunhu) kwaive kwakaderera uchienzaniswa naJuly 2019 ($ 216 pamunhu).
Paive nevashanyi 2,817 vaibva kuJapan muna Chikunguru 2021, zvichienzaniswa nevashanyi makumi mashanu nevashanu (+ 54%) muna Chikunguru 5,162.0, maringe 2020 vashanyi (-134,587%) muna Chikunguru 97.9. Vashanyi vanobva kuJapan vakashandisa $ 2019 miriyoni muna Chikunguru 11.2 zvichienzaniswa ne $ 2021 mamirioni (- 186.5%) muna Chikunguru 94.0.
Muna Chikunguru 2021, 1,999 vashanyi vakasvika vachibva Canada, zvichienzaniswa nevashanyi 94 (+ 2,018.9%) muna Chikunguru 2020, vachipesana 26,939 vashanyi (-92.6%) muna Chikunguru 2019. Vashanyi vanobva kuCanada vakashandisa $ 5.5 mamirioni muna Chikunguru 2021 zvichienzaniswa ne $ 50.1 mamirioni (- 88.9%) muna Chikunguru 2019.
Pakanga paine 23,285 2021 vashanyi kubva kuAse Other International Misika muna Chikunguru 2,008. Vashanyi ava vaibva kuGuam, Other Asia, Europe, Latin America, Oceania, Philippines, uye Pacific Islands. Mukuenzanisa, paive nevashanyi ve1.059.5 (+ 2020%) kubva kuAse Mamwe maMarket epasi rose muna Chikunguru 127,510, maringe ne81.7 vashanyi (-2019%) muna Chikunguru XNUMX.
Muna Chikunguru 2021, huwandu hwe6,275 trans-Pacific ndege uye 1,292,738 zvigaro zvakashandira iyo Hawaiian Islands, zvichienzaniswa nendege 741 chete uye zvigaro 162,130 muna Chikunguru 2020, maringe ne5,681 ndege uye 1,254,165 zvigaro muna Chikunguru 2019.
Kuburikidza nemwedzi minomwe yekutanga ya2021, mari yevaenzi yese yaive $ 6.60 bhiriyoni. Izvi zvaimiririra kuderera kwe37.5 muzana kubva pamadhora gumi nemashanu emabhiriyoni yakashandiswa kuburikidza nemwedzi minomwe yekutanga ya10.55.
Vashanyi va3,631,400 vakasvika mumwedzi minomwe yekutanga ya2021, kuwedzera kwe66.7 muzana kubva pagore rapfuura. Vasvika vese vaive 41.1 muzana yakaderera zvichienzaniswa nevashanyi vanosvika 6,166,392 2019 XNUMX mumwedzi minomwe yekutanga yaXNUMX.
“Patinopedzisa mwaka wepamusoro wezhizha uye tichipinda mumwaka unononoka wemwaka tinosangana nekuderera kwechisikigo kwevanosvika kubva kumusika weUS panguva ino yenguva yepafudzi. Munguva ino, isu hatina vatsva vanofungidzirwa kusvika kune dzimwe nyika, saka zvinotarisirwa kunonoka kupfuura zvakajairwa pamusika wese. Musika wacho unotarisirwawo kuve wakapfava sezvo isu tichiona kudzikira munguva yekumberi yekubhuka nekuda kwekusava nechokwadi kwakagadzirwa kwakatenderedza iyo COVID-19 Delta musiyano. Tinotarisira kuti vanosvika vanonoke munaGunyana naGumiguru kutanga mushure mevhiki reVashandi Zuva. Vanosvika vanogona kunyudza pakati pezvikamu makumi mashanu kubva muzana kusvika makumi manomwe kubva muzana zvegore ra50, ”akadaro McCartney.